Ukwelashwa kwezifo zezitshalo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukwelashwa kwezifo zezitshalo
Sitshala i-cherry ephuzi ensimini. Izici izinhlobo nokunakekelwa
Sonke siyazi ukuthi i-cherry enhle iyibhisi elibomvu noma elibomvu elibomvu elibomvu. Nokho, eqinisweni, kunezinhlobo ezingavamile kakhulu. Lezi zihlanganisa lezo cherries, izithelo zazo ezinombala ophuzi. Ngesikhathi esifanayo, zifana nezihlwabusayo futhi zikhangele nakakhulu ngenxa yombala wazo ongajwayelekile. Ake sihlole izinhlobo, ukutshala izici kanye nemithetho yokunakekelwa kwe-cherry ephuzi.
Indlela yokunakekela i-gloxinia ekhaya: ukulawulwa kwezinambuzane kanye nokuphathwa kwezifo
I-Gloxinia iyisitshalo se-tuberous esinezimbali ezinemibala emihle, amaqabunga e-velvet kanye nesigamu esifushane, esilungu lomndeni wakwaGesneriyev. Endaweni yayo yemvelo, itholakala emahlathini asezindaweni ezishisayo zasePeru naseBrazil. I-Gloxinia ayithobekile, kodwa ukuze ikhule futhi ikhule ngendlela evamile ekhaya, umlimi kumele enze imizamo ethile.
Uhlu olugcwele lwe-fungicides zezitshalo
Ama-fungicide yizinto ezivimbela kancane noma ezibhubhisa izifo ezihlukahlukene zezitshalo. Kunezinhlawulo eziningana zaloluhlobo lwezinambuzane ezibulala izibulala, kuye ngokuthi isenzo, izici zamakhemikhali, nendlela yokusebenza. Okulandelayo, sinikeza uhlu oluphelele lwe-fungicides, olwethulwa ngendlela yohlu lwezinhlobo ezithandwa kakhulu zezitshalo ngamagama nezincazelo kubo.
I-fungicide "i-Ordan": imiyalelo yokusetshenziswa kwesidakamizwa
Isidakamizwa esithi "Ordan" sakwa-agrochemists sincoma ukuvikela amagilebhisi, anyanisi, utamatisi, ukhukhamba, amazambane kanye nezinye izifo ezithinta izifo. Amathuluzi amaningi enza ukuthi izinhlamvu eziluthayo zibe izithako ezisebenzayo futhi azikwazi ukubhekana nokulimala okuphelile, i-alteranriosis, ne-peronospora. Yilikhwalithi ehlukanisa i-"Ordan" ye-fungicide, engenazo izinto okungenzeka zifake isikhunta.
"I-Previkur Energy": incazelo, ukwakheka, isicelo
Yonke insimu ngokushesha noma ngokuhamba kwesikhathi kufanele inqobe izihlahla nezihlahla ezivela ezinambuzaneni ezingenakwenzeka futhi zilaphe izifo. Futhi ngayinye inezindlela zayo zokusebenzisana nazo, isipiliyoni esiqinisekisiwe. Kunezidakamizwa eziningi ezimakethe ngalezi zinhloso, futhi manje sizokhuluma ngomunye walawa abizwa ngokuthi i-Previkur Energy.
Indlela yokuzala onogwaja egaraji
Yenza-wena-ngokwakho kuqhume iqhwa: ukuhlaziywa kwemiklamo emi-3 emihle eyenziwe ekhaya
UHirita: incazelo, izici zokunakekelwa
I-CO2 generator yezokugcina izithombo nezinye izindlela zokuhlela izithombeynthesis zezitshalo zakho
Ukutshala Isihlahla Sama-Apple ku-Autumn: Umhlahlandlela Ophelele weNewbie
U-Eucharis - ukunakekelwa kwasekhaya. Kungani kungaqhakaza
Indlela yokwakha indawo yokucima umlilo emkhathini we-landscape ku-dacha yakhe